Ganacsato Soomaali Ah Oo Markale Lagu Dilay Konfur Africa. – Bogga Calamada.com
Ganacsato Soomaali Ah Oo Markale Lagu Dilay Konfur Africa.
Wararka ka imaanaya dalka Konfur Afrika waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah dalkaasi lagu dilay Ganacsato Somali ah oo qeyb ka ah Somalida ku dhaqan dalkaasi.
Dil Kowaad waxa uu ka dhacay Tuulo Hoostagta magaalada Cape town waxaana loo geystay Wiil Soomaaliyeed oo Mehred ganacsi ku lahaa Tuulada hoostagta magaaladaasi.
Ruuxa gacansadaha ah ee lagu dilay duleedka Cape town ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Catoosh kaasi oo ay dileen Kooxo Burcad Konfur Afrikan ah oo doonayay iney dhac u geystaan goobtiisa ganacsi ee ku taala Tuulada ay ku dileen.
Dilka loo geystay Muxamed Catoosh waxa uu kusoo aadayaa xilli sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah dalka Konfur Afrika lagu dilay Ganacsado Soomaaliyeed oo isagana lagu magacaabi jiray Fu’aad kaasi oo sidoo kale ay dileen Kooxo Burcad Konfur Afrikan ah.
Bishii u dambeysay waxaa gudaha dalka Konfur Africa lagu dilay Shan ruux oo ka mid aheed Soomaalida ku ganacsatada gudaha dalka Konfur Afrika waxaana xusid mudan in Sanadkii lasoo dhaafay gudaha dalkaasi lagu dilay (139) Boqol Soddon Iyo Sagaal Ganacsato Somali ah kuwaasi oo ay dileen hantidoodiina ay boobeen kooxo burcad Konfur Afrikan ah waxeyna tani muujineysaa xaalada adag ee ay ku suganyihiin Soomaalida ku ganacsata Gobalada dalka Konfur Africa.